> Resource> iTunes> ụzọ dị mfe iji Nyefee Music si iPod kpochapụwo ka iTunes
Old kọmputa nwụrụ. Nwere onye ọhụrụ. Olee otú m nwere nyefee niile music faịlụ na m iPod kpochapụwo ka iTunes na ọhụrụ kọmputa?
Wee ọhụrụ PC na ugbu a chọrọ nyefee music si iPod kpochapụwo ka iTunes iwu gị iTunes n'ọbá akwụkwọ? Na niile songs na gị iPod kpochapụwo, ọ bụrụ na ị na-agbali ka mmekọrịta ya na iTunes, iTunes ga-ewepụ ihe niile na gị iPod kpochapụwo.
Dị otú ahụ dị otú ahụ, na-idetuo music si iPod kpochapụwo ka iTunes, ị ga-agbalị ihe ọzọ. Lee, m ga-egosi gị a dị mfe ma bara uru n'ụzọ nyere gị aka pụta. All gị mkpa bụ ibudata a dị ike iPod ka iTunes transfer - Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) .. Na ya aka, ọ bụ naanị otu nke achicha ịkwaga songs na listi ọkpụkpọ na gị iPod kpochapụwo ka iTunes n'ọbá akwụkwọ na PC gị. Na addtion, nke a iPod ka iTunes transfer nwekwara ike gị nyefee iPod kpochapụwo music gị na kọmputa.
Bugharịa music si iPod kpochapụwo ka iTunes
N'okpuru ebe a bụ mfe nzọụkwụ banyere akpụ akpụ songs si iPod kpochapụwo ka iTunes n'ọbá akwụkwọ na PC gị. Ugbu a, ka na-aga site na ha.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPod kpochapụwo ka PC mgbe na-agba ọsọ a usoro
Nke mbụ niile, ibudata ma wụnye a usoro na PC gị. Na-agba ọsọ ya. Ọ bụrụ na ị wụnye iTunes na kọmputa gị, programmụ a ga-enye gị iTunes echichi window. Dị otú ahụ dị otú ahụ, ị ​​kwesịrị ị na wụnye iTunes na kọmputa gị. Mgbe ahụ, jiri eriri USB jikọọ gị iPod kpochapụwo na gị PC. Ozugbo ha na-njikọ, a usoro ga-chọpụta gị iPod kpochapụwo n'otu ntabi, na mgbe ahụ na-egosipụta ya na isi interface. Na ekpe ndekọ osisi, na ị na-enwe ike na-ele niile ọdịnaya na gị iPod kpochapụwo.
Nzọụkwụ 2. Export music si iPod kpochapụwo ka iTunes
Mgbe ahụ, mbupụ music azụ iTunes n'ọbá akwụkwọ n'oge na-adịghị, ị nwere ike pịa mbụ button - "Copy Music ka iTunes" na ala akara nke isi interface. na window na Pop elu, pịa "Malite". Ebe ọ bụ na mgbasa ozi faịlụ na-enyocha, ị kwesịrị ị uncheck ọzọ media faịlụ ma e wezụga music. Mgbe ahụ, a usoro ga-enyere gị mbupụ ndị a songs ka iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Cheta na: Wondershare TunesGo bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iPod kpochapụwo 3, iPod kpochapụwo 2 na iPod kpochapụwo.
N'ezie, ị na-eru nke syncing music si iPods kpochapụwo ka iTunes site na-eme nke a. Pịa "Media", taabụ na ekpe ndekọ osisi. Nke a na-ahụ media window na nri panel. Mgbe ahụ, pịa "Music". Na music management window, họrọ songs ị na-ekpebi enuba iTunes n'ọbá akwụkwọ. Wee pịa "Smart Mbupụ na iTunes". N'otu aka ahụ, a na-eme ka button gị site na nkwanye otu songs na e zigara iTunes n'ọbá akwụkwọ tupu. Ma ọ bụ ị nwekwara ike mezuo ọrụ site na ịpị abịazi nọdụ triangle "Mbupụ na" na mgbe "Mbupụ na iTunes Library".
Mere! Na i tinyeworị streamed music si iPod kpochapụwo ka iTunes. Ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee dum listi ọkpụkpọ, họrọ "Playlist" taabụ na ekpe ndekọ osisi. Mgbe ahụ gị chọrọ listi ọkpụkpọ na pịa "Export ka" button.
Otú nyefee Photos site na kọmputa na-iPod aka
Olee otú ị tinye sere iTunes